प्रत्येक आवासीय क्षेत्र वा कार्यालयमा एक बिरूवा हुनुपर्छ। आखिर, तिनीहरूले हाम्रो हावा क्लीनर बनाउन। एक सजावटी समारोह थप एक पहाडी lyre प्रदर्शन जो यी बिरुवाहरु, को। आफ्नो मातृभूमि छ पश्चिम अफ्रीका। पहाडी यस प्रकारको फाँटमा र ट्रपिकल जङ्गलहरूमा बढ्छ। यसलाई यो बोट घरमा बढ्न धेरै सजिलो छ उल्लेख गर्नुपर्छ। आखिर, यो विशेष हेरविचार आवश्यकता छैन।
के प्रकाश हुनुपर्छ?
ठहराव को एक राज्य मा पहाडी lyre शरद ऋतु र जाडो। किनभने यो समयमा रोशनी को स्तर, साथै अवधि डेलाईट को एकदम कम छ। निस्सन्देह, छैन दिएको प्रकार बाँकी अवधि व्यक्त गर्दैन। crown गर्न बोट समान गठन भएको थियो, यो यसको अक्ष वरिपरि कम्तिमा हप्तामा एक 90 ° द्वारा बारी आवश्यक छ।
यस मामला, पहाडी lyrata, हेरविचार विशेष प्रकाश आवश्यक पर्याप्त सजिलो छ जसमा:
सेप्टेम्बर को अन्त सम्म अप्रिल को शुरुवात देखि बोट दिन को 11 17 घण्टामा केही बिखरे प्रकाश आवश्यक छ। समय बाँकी - प्रत्यक्ष सूर्य को रेज, गणना छैन, बिल्कुल, रात-समय।
मार्च को अन्त गर्न अक्टोबर को शुरुवात देखि, पहाडी पनि प्रत्यक्ष सूर्यका आवश्यक छ। आदर्श, कवरेज एक दिन 8 घण्टा वर्तमान हुनुपर्छ।
तापमान पनि महत्त्वपूर्ण छ
lyre राम्रो बढ्न पहाडी, एक निश्चित तापमान कायम गर्नुपर्छ। तसर्थ, दिन सूचक 25 देखि 30 ° सी, र राती हुनुपर्छ - 16 देखि 18 ° सी मा केवल बोट को विकास गर्न यी मतभेद। यदि कोठा तापमान नाघ्यो 35 ° सी, को, वनस्पति विकास व्यावहारिक नेभाराको ceases।
पानी अवश्य छ
पहाडी lyre टीन कसैले अलिकति माटो माथि सुकेको छ कि मात्र घटनाको आवश्यक छ। यो उद्देश्य लागि ट्याप देखि कच्चा पानी प्रयोग भने, यो कम्तिमा एक दिनको लागि खडा गर्नुपर्छ। यसले मा क्लोरीन सामग्री कम गर्नेछ। जरा पहाडी पदार्थ धेरै संवेदनशील lyrata।
माटो र transplanting
पहाडी lyre गर्न, राम्रो तरिकाले जो प्रभावशाली छन् एक फोटो, वृद्धि, तपाईं उहाँलाई लागि सिद्ध जमीन तयार गर्न आवश्यक छ। यो गर्न, टर्फ माटो, एक भाग पीट र perlite वा भद्दा बालुवा को नै रकम तीन भागहरु जडान गर्नुहोस्। मिश्रण आवेदन गर्नु अघि sterilized गर्नुपर्छ।
संयंत्र को प्रत्यारोपण लागि जाँदा, त्यसपछि यसलाई आवश्यक लगभग 20% अघिल्लो भन्दा ठूलो छ जो क्षमता, प्रयोग गर्न छ। यस्तो प्रक्रिया पूरा मा पहाडी lyrata तयार गर्नुपर्छ। तिनीहरू बढ्न थालेपछि जरा छाँटिँदै मामला मा आवश्यक छ। त्यहाँ एक नियम छ। लागत को जरा को तेस्रो भन्दा कुनै ट्रिम। साथै, सबै क्षतिग्रस्त र decayed क्षेत्रमा हटाउन।
संयंत्र वर्षमा एकपटक हुनुपर्छ Repot। यो प्रक्रिया को लागि आदर्श समय छ - अप्रिल वा मे। यो अवधि नेभाराको को सक्रिय वृद्धि पुनः सुरु समयमा थियो। यसलाई सही पट चयन गर्न आवश्यक पनि छ। एक ठूलो बोट को पनि सानो क्षमता बस उल्टिनु भनेर मनमा राख्नुहोस्।
म खाद गर्नुपर्छ?
को वनस्पति विकास सुरु गर्दा फिड पहाडी lyre धेरै समय खडा। यस्तो प्रक्रिया मार्च मा सुरु र सेप्टेम्बर अन्त्य। तर, अपवाद, उदाहरणका लागि कोठा मा उच्च तापमान वा लामो समयसम्म बादल दिन हो,। यस्तो समयमा, यो बोट खुवाउन असम्भव छ।
तपाईं पनि रुचाउने समयमा होसियार हुनु आवश्यक छ। संयंत्र विभिन्न रसायन धेरै संवेदनशील छ। समाधान पातहरुमा हुन्छ भने, जला उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले, कुनै पनि, को बिरूवा को हरियो भाग सम्पर्कमा मल पनि सानो थोपाहरूद्वारा हटाउन पर्छ।
छ भने बोट इष्टतम अवस्थामा फेला, त्यसपछि यसलाई हरेक 14 दिन खुवाउनुभयो गर्नुपर्छ। यदि खेती सबै नियम पूरा छैन, त तपाईं मल एक पटक मात्र 30 दिनमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ।
आदर्श खनिज मिश्रण र समाधान, इरादा गर्दै छन् जो सजावटी पत्ते बिरुवाहरु लागि खुवाउन। तथापि, मल को एकाग्रता 50% निर्देशनहरू निर्दिष्ट भन्दा कम मा गर्नुपर्छ।
पत्रक हेरविचार को आवश्यकता मा पनि हो
धेरै Housewives rubbed घर पहाडी रासायनिक को माटो हटाउन Polishes। यस मामला मा, यो के गर्नु हुँदैन। अन्यथा, जला मुनाहरू पहाडी lyre प्रदर्शित हुनेछ।
गर्मी र वसन्त मा तपाईं बोट शवर व्यवस्था गर्न सकिन्छ। पानी यसलाई गर्दा न्यानो हुनुपर्छ। प्रक्रिया प्रत्येक 30 दिनमा प्रदर्शन गर्नुपर्छ। सबै पात पछि तपाईं शवर सुक्खामा आवश्यक छ। यसो गर्न, तपाईं नियमित तौलिया प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं पात बाट चिस्यान हटाउन भने, त्यसपछि तिनीहरूले कुरूप divorces रहनेछ र बोट यसको अपील हराउछ।
जाडो र गिर तपाईं पहाडी शवर गर्न सक्नुहुन्न। यो समयमा, पातहरु बस एक नम कपडा संग सखाप गर्न सकिन्छ।
यसलाई राख्न सम्भव छ?
जब यो गर्मी र हावा तापमान सडक मा राख्न सकिँदैन सिफारिस, पहाडी lyre गर्न सकेसम्म नजिक हुनेछ। तुरुन्तै प्रत्यक्ष सूर्यका मा lyre आकारको रबर बोट संग पट विकल्प छैन। उहाँलाई लागि, यो धेरै खतरनाक हुन्छ। को बोट बिस्तारै परिवर्तन गर्न प्रयोग प्राप्त गर्नुपर्छ। तसर्थ, सुरुमा यो पहाडी जरूरी छाया मा राख्नु हो, र केही हप्ता पछि - diffused प्रकाश अन्तर्गत।
पहाडी lyrata कसरी कटौती गर्ने?
कहिलेकाहीं यो मात्र जरा ट्रिम गर्न आवश्यक छ। वास्तवमा, बोट एकदम तीव्र गतिमा बढ्दै छ। त्यसैले, यो कहिले काँही पहाडी lyre prune महत्त्वपूर्ण छ। मुकुट को गठन - अर्को महत्त्वपूर्ण अवस्था छ। सामान्यतया, सीमित गर्न क्रप को वृद्धि interstices को खण्डहरू बनाउने, भूमि माथि छ।
सन्दर्भमा आफ्नो घोडाहरू हावा संग, तिनीहरूले आवश्यक भएमा हटाउन सकिँदैन। यस मामला मा, कुनै प्रतिबंध हो।
संयंत्र एक टाँसिएको सेतो रुखको रस विज्ञप्ति रूपमा छाँट्ने समयमा, सावधान हुनुपर्छ। छाला मा तरल संग सम्पर्क पछि त्यहाँ बलियो उत्तेजना छ। रस पातहरुमा पायो भने, यो तुरुन्तै पहाडी गर्दा चोट बिना मेटाउन गर्नुपर्छ। तरल धेरै चाँडै dries र यसलाई हटाउन धेरै गाह्रो छ।
पहाडी lyrata: प्रजनन
यो प्रश्न यस्तो बोट धेरै प्रशंसक गर्न चासो को सायद छ। वनस्पति तरिका यस प्रकारको को गुणन समयमा, यो जरा धेरै लामो फारम हुनेछ सजग हुनुहोस्। यस मामला मा, त्यहाँ अपवाद हुन्छन्। पहाडी lyre को प्रजनन को सबै भन्दा दु: खबाट-मुक्त तरिका - हावा उपभेदों को प्रयोग।
यस मामला मा, बोट सामाग्री एक जवान बढ्दै गोली मार छ। यो एक केन्द्रीय स्टेम र पार्श्व layering हुन सक्छ। उहाँले विकास गर्ने मुख्य कुरा। रोपण सामाग्री अलिकति वुडी र हरियो, तर नरम छैन हुनुपर्छ। को पाठ्यक्रम सबैभन्दा खराब विकल्प - पूर्ण स्टेम छाल ढाकिएको छ प्रजनन लागि प्रयोग गर्न छ।
को रोपण सामाग्री को व्यास 15 मिलिमिटरमा नाघ्न हुँदैन। स्टेम को सानो मोटाई, अधिक सही यो आवश्यक बोट छ।
त्यसैले, तपाईं पहिलो लम्बाइ जो 15 25 सेन्टिमिटर छ, एक बढ्दै गोली मार चयन गर्न आवश्यक छ। वृद्धि यसलाई एक मृगौला र केही पात विषय। अरू सबै कुरा 10 सेन्टिमिटर को एक भाग प्रकट गर्ने, हटाइयो हुनुपर्छ। तपाईं त पात नोड्स, जस्तै केन्द्र सकेसम्म नजिक स्थित छ जो एक रोज्नुपर्छ।
यो बिन्दुमा, तपाईंले चीरा बनाउन आवश्यक छ। प्रयोग मात्र स्टेराइल साधन गर्नुपर्छ। एक चीरा गाँठ अन्तर्गत गरिनु पर्छ। यस मामला4मिलिमिटरमा एक व्यास संग स्टेम, यो 1 मिलिमिटर एक चीरा गहिराई बनाउन आवश्यक छ, र 15 मिमी को एक व्यास संग - देखि 12मिलिमिटरमा।
जहाँ चीरा गरिएको थियो ठाउँ, आवश्यक धोए हुनुपर्छ सफा उसिनेर तर चिसो पानी। त्यसपछि तपाईं एक सानो चीरा मतलब छ, जरा वृद्धि बढावा जो लागू गर्न आवश्यक छ।
अब तपाईं पानी र 30 मिनेट को लागि सोख गर्न आवश्यक sphagnum मश। यसलाई अन्त मा निर्धारित समय हटाउन पर्छ। एक नम मश र प्लास्टिक र्याप र्याप गर्न knurled आवश्यकता राख्न, र त्यसपछि दृढ तार ठीक।
हामी बीउ देखि बढ्न
हामी एक पहाडी lyrata छ निर्णय? प्रजनन पाना असम्भव छ, तर त्यहाँ बीउ अझै पनि छन्। अंकुरण धेरै हप्ता देखि3महिना लाग्न सक्छ किनभने यो विधि संग, रोगी हुनुपर्छ। पहाडी बीउ को राम्रो अंकुरण लागि एकै समयमा प्रकाश आवश्यक छ। त्यसैले, तिनीहरूले डाले हुनुपर्छ। यो माटो मा एक सानो धक्का Suffice। इष्टतम प्रकाश - आंशिक छाया वा diffused प्रकाश। तर तापमान सूचक हुनुपर्छ 25 ° सी
अब तपाईं पहाडी घर हेरचाह कसरी थाहा छ। तपाईंले सबै नियम पालना भने, त्यसपछि बोट बढ्न धेरै चाँडै हुनेछ। मुख्य कुरा हो - पानी हाले र उसलाई खुवाउनुभयो गर्न समय। को lyre आकारको रबर बोट हल्का प्रेम गर्नुहुन्छ भूल छैन। एक गाढा ठाउँमा यो बोट बस मर्छ। किरा लागि जाँदा, त्यसपछि पहाडी lirovidnaya खतरनाक herbivorous कण, लाईकीराको, जोस मात्रा र छन् mealybug।
कारण: Scheffler मा गिरावट छोड्छ। Scheffler के पात, खस्छ?
"एशिया" (स्ट्रबेरी): विविधता र समीक्षा विवरण
प्लास्टिक Windows: जो सबै उपलब्ध छन् मूल्यहरु
भारतीय melodrama - भारत को आत्मा
रचनात्मकता र साहस - nalyso Mowing
रेस्टुरेन्ट "क्रिस्टल" (क्रास्नायार्स्क) - परम्परागत घरबार स्थान
अखबार बाट सजिलै र छिटो कसरी गर्ने
Funes, Lui डी (लुई Germain दाऊदले डे Funès डे Galarza)। लुइस डे Funes: Filmography, फोटो